Article sendlela vula microphone laptop
laptops eziningi zanamuhla esingcono phezu onobuhle amadala, okuyinto esakhelwe imisebenzi, kodwa badinga ukwazi ukusebenzisa. Ngokwesibonelo, indlela ukuze ujike microphone kwi laptop?
abasebenzisi PC manje akusadingeki umbhobho ahlukene eyolanda i-laptop, ukuthenga kakhulu, futhi ngokucophelela ukuxhuma ke. Ngakho ugcine kakhulu isikhathi nemali. Nokho, ngokuvamile, ngisho khona imisebenzi esakhelwe ungazange ngempela abasebenzisi abanolwazi unemibuzo, indlela ukuze ujike imakhrofoni kukhompuyutha ephathekayo, ngoba ingavuli ngokuzenzakalelayo. Uma umbhobho empeleni ukuze ukusebenza, isizathu salokhu kungenzeka ukuthi akukhona ilungiswe kahle, nokuthi edinga ukulungiswa.
Ngiyinika kanjani vula-microphone i-laptop - a spoosb elula
Okokuqala abasebenzisi kudingeka uhlole khona i-microphone. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi ukufunda ezibekiweko notebook yakho, lapho kuyobe ilotshiwe ncamashi, noma has a umsebenzi eyakhelwe ngaphakathi.
amathiphu Encane (ngaphambi kokwenyuka imibhalo enamathiselwe kukhompyutha yakho) kuyoba ukutholakala web-ikhamera, ngoba uma kukhona, khona-ke nabo esakhelwe izikhulumi khona. Futhi ukuthola i-microphone kukhompyutha yakho ukuze usize "Isiphathi sedivayisi."
Isinyathelo sesibili, indlela ukuvula microphone i-laptop, zithintana khona futhi izilungiselelo isikhulumi. Ukuze wenze lokhu, uhlole ukuze ubone uma siboniswa "Sound" sigaba, "REC" ithebhu. Lapho ukubonisa imakrofoni laptop futhi uhlole ukuze ubone ukuthi ingabe likhona. Ukuze wenze lokhu, ukubheka idivayisi kulungiselelwa ku "Okuthuthukisiwe" ithebhu, "ngcono" futhi "amazinga".
Amathuba zinhle futhi ukuthi umbhobho umi nje kuthule umsindo ukudluliswa mode, uma nakukhona namanje ezwakalayo. Indlela ukusetha i-microphone kwi laptop kulesi simo? Iya "Control Panel", vula "Sound" ke kwimenyu yiya engxenyeni ethi "Properties" bese "Imakhrofoni".
Lapha wokuhlola ohleliwe "Vumela izinhlelo zokusebenza ukusebenzisa kudivayisi kwaqhuma imodi" lapha "Nikeza imodi okukhethekile izicelo kuqala" kuthebhu ngokuthi "Okuthuthukisiwe". Wena zama ukuhlola i-microphone yakho ngemva kokuhlela aphakeme kancane ukujula. Kuleso simo, uma wenza konke ngendlela efanele, ukuthi kahle usethe idivayisi, ungezwa wena kahle. Kungenjalo, ukuphinda inqubo futhi esikhundleni imvamisa kancane.
Indlela usethe i-microphone ephathekayo ezinye imiphumela extra? Ukuze wenze lokhu, udinga ukusebenzisa amathuluzi athile, ngoba incike uhlobo ikhadi umsindo. Ngokwesibonelo, ukuze ujike kwi ukwesula umbhobho echo noma umsindo noma ukukhombisa ibanga ku-microphone kukhompuyutha ephathekayo, ungasebenzisa amathuluzi kunazo owaziwa, ezifana Manager Realtek.
Ngokuvamile ohlwini imibhobho ungakwazi ukuthola khona zimbalwa izikhulumi esakhelwe ngaphakathi. Futhi ukuze abone ukuthi yiliphi okuyinto, ungavele hit kancane eduze microphone - kanye sizovela uphawu green kumugqa.
Indlela ukuxhuma Skype: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo.
Lenovo IdeaPad Yoga 13: ukubuyekezwa, ukubuyekeza
Yekuchumana mayelana nendlela kukhompuyutha ephathekayo "Lenovo" ukuvula ugqoko disc
Kanjani ukulungisa iphutha "Cabanga esikhundleni ibhetri yakho ku notebook"? Okufanele ukwenze kuleli cala?
Acer Extensa 5620 notebook
I-acupuncture ngoba hernia umgogodla: Izimo, izibuyekezo, izithombe
Ulwazi izigaba yentuthuko womuntu: Uhlolojikelele, izici
Apple pie ukhilimu omuncu: Recipe
Okugeza Acrylic: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo yokumiswa yayo
Imenyu Ukudla okune-carbohydrate-free, futhi imithetho eyisisekelo
"Nokia Lyumiya 520": Ucingo izici, izibuyekezo nezithombe
Ukulwa nezindiza zezindiza - izikhali zekhulu lama-XXI
Yini esiyaziyo ugwayi electronic?